रुसी सेनाले आक्रमण गर्दा घटनास्थलमै मारीए नवीन, अरु विद्यार्थीको अवस्था के छ ? — Imandarmedia.com
रुसी सेनाले आक्रमण गर्दा घटनास्थलमै मारीए नवीन, अरु विद्यार्थीको अवस्था के छ ?
काठमाडौं। युक्रेनको खारकिभमा रुसी सेनाको आक्रमणमा एक जना भारतीय विद्यार्थीको हिजो मृत्यु भयो। भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले यसको पुष्टि गरेका थिए।
बीबीसी हिन्दीले मारिएका छात्र नवीनका साथीसँग कुरा गरेको छ। खारकिभमा नवीनसँगै रहेका ती साथीका अनुसार नवीन बंकरबाट निस्किएर खाना लिन सुपरमार्केट गएका थिए तर उनी फर्किएनन्।
यसअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता बागचीले ट्वीट गर्दै भनेका थिए ‘गहिरो दुखका साथ हामी यसको पुष्टि गरिरहेका छौं कि खारकिभमा गोलीबारीमा एक भारतीय छात्रको मृत्यु भएको छ।
मन्त्रालय उनका परिवारको सम्पर्कमा छ। उनले मृतकका परिवारप्रति सहानुभूति प्रकट गरेका थिए । बीबीसीले खारकिभमा नवीनसँगै बस्ने भारतीइ छात्र श्रीकांत चेन्नागौडासँग कुरा गरेको हो।
नवीनले आफ्ना नजिकका साथी श्रीकांतलाई पैसा ट्रान्सफर गर्न भनेका थिए ताकि उनी खाना किन्न सकुन् । खारकिभबाट बीबीसीसँग कुरा गर्दै मेडिकल विद्यार्थी श्रीकांतले भने ‘उनले मलाई बिहान ८ बजे फोन गरे र पैसा ट्रान्सफर गर्न भने किनकि उनीसँग खानाको लागि पुग्ने पैसा थिएन।
उनी हामी सबैको लागि खानेकुरा किन्न गएका थिए ।’ कर्नाटकको हावेरी जिल्लाको रानेबेन्नूरका नवीन विगत ४ वर्षदेखि खारकिभको नेशनल मेडिकल युनिभर्सिटीमा श्रीकांतसँग मेडिकल अध्ययन गरिरहेका थिए।
जानकारी अनुसार नवीन बिहान कर्फ्यु सकिएपछि करिब साढे ६ बजे आफ्नो बंकरबाट निस्किएका थिए । सहरमा दिउँसो ३ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म कर्फ्यु लगाइएको छ । नवीन र श्रीकांत आफ्ना साथीहरुसँग बस्थे।
बंकर उनीहरुको अपार्टमेन्टको मुनि छ । त्यहाँबाट सुपरमार्केट करिब ५० मिटर दूरीमा छ ।श्रीकांतले बीबीसीसँग भने ‘मैले पैसा ट्रान्सफर गरिदिएँ र ५–१० मिनेटमा उनलाई फोन गरें तर उनले फोन उठाएनन्।
त्यसपछि मैले उनको स्थानीय नम्बरमा फोन गरें । फेरि पनि उनले फोन उठाएनन् । त्यसपछि अरु कसैले फोन उठायो र युक्रेनी भाषामा बोल्न थाल्यो जुन भाषा मलाई आउँदैन।
श्रीकांतले फोन शेल्टरमा भएका एक व्यक्तिलाई दिए । कुरा गरेपछि ती व्यक्तिले श्रीकांतलाई ‘तिम्रा साथी अब रहेनन्’ भने ।श्रीकांतले भने ‘मलाई विश्वास भइरहेको थिएन। त्यसपछि म सुपरमार्केट गएँ ।
त्यहाँ कुनै विष्फोट भएको जस्तो कुनै निशान थिएन ।’ श्रीकांतलाई लागिरहेको छ कि नवीनलाई कहीँबाट गोली हानिएको हुनुपर्छ ।उनले भने खारकिभमा धेरै बमबारी भइरहेको छ । बंकरमा हामी ९ जना थियौं।
५ जना गए तर हामी जोखिम लिन चाहँदैनथ्यौं त्यसैले यहीँ बस्यौं। हामी बुधबार बिहान त्यहाँबाट निस्किने योजना बनाइरहेका थियौं ।श्रीकांतका अनुसार नवीनको शव कहाँ छ भन्ने उनलाई अझै थाहा छैन।
तेस्तै, युक्रेनका विभिन्न क्षेत्रमा युद्धका कारण फसेका नागरिकलाई जोगाउन र स्थान्तरण गर्न रुसले आक्रमण रोक्ने जनाएको छ। युद्धग्रस्त क्षेत्रमा फसेका सर्वसाधारणले युद्ध विराम भएको समयमा विभिन्न क्षेत्रहरु छाड्नुपर्ने रुसी सर्त रहेको छ।